I-Pilot's Manor-Airport Villa
Indlu ephangaleleyo necocekileyo kwidolophu yaseZagreb, engaphantsi kwe-5km kude neSikhululo seenqwelomoya saseZagreb, ngaphantsi kwe-15km kude neZiko laseZagreb, kufutshane kakhulu neevenkile ezinkulu, iibhari zokuphumla, iindawo zokutyela kunye nesikhululo segesi esingama-24/7 esinevenkile enkulu.
Njengesibini sabasebenzi benqwelomoya esinobusuku obuchithelwe kwiihotele kwihlabathi liphela sisebenzise amava ethu ukulungiselela indawo egqibeleleyo yeendwendwe zethu.
Le ndlu ibandakanya igumbi lokulala elikhulu eline-ensuite kunye namagumbi amabini ahlukeneyo okulala ahlukeneyo anegumbi lokuhlambela losapho ekwabelwana ngalo.
Igumbi lokutyela eliphangaleleyo labantu abali-12 elinendawo yombane yangaphakathi kunye nenkqubo yesandi sebluetooth, ikhitshi elixhotyiswe kakhulu, igumbi lokuhlala elineesofa zamacandelo amabini avumela iindwendwe eziya kutsho kwi-10 ukuba zihlale kule ndlu.
Ireyithi yeflethi yasimahla ye-WIFI yonke indlu.
I-TV enkulu enkulu eneNetflix kunye nengqokelela yeemuvi ezimnandi.
Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezimbini.
Igadi yabucala ebanzi enendawo yokuphumla enendawo yomlilo yangaphandle.
Igumbi lokudlala elinetafile foosball kunye netafile yepoker.
I-Pilot's Manor ikwisitrato esithandekayo esekwe kusapho. Nokuba ikufutshane kakhulu kwisikhululo seenqwelomoya saseZagreb phantse akukho ngxolo yengxolo yenqwelomoya njengoko ingalali kwindlela yenqwelomoya.
Iindwendwe ziyakwazi ukuzijonga okanye zinokwamkelwa sithi ukubanika izitshixo kwaye baphendule nayiphi na imibuzo. Emva kokungena iindwendwe ziya kunikwa ubumfihlo obugcweleyo ngaphandle kokuba zifuna naluphi na uncedo.
Thina ziyafumaneka naziphi na qouestions ngefowuni, umbhalo okanye email 24/7.
Iindwendwe ziyakwazi ukuzijonga okanye zinokwamkelwa sithi ukubanika izitshixo kwaye baphendule nayiphi na imibuzo. Emva kokungena iindwendwe ziya kunikwa ubumfihlo obugcweleyo nga…